UKorehiko Hino kunye nommangaliso kumanani abantu njengoonodoli | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Emva ezimbalwa iiveki zobuhle obukhulu kunye nokuchukumisa okungathethekiyo Ekusetyenzisweni kwezixhobo ezahlukeneyo, ezinje ngekhekhe likaRomero, siza kuya kwizinto ezimangalisayo, ezinemvukelo kunye noloyiko lwengqondo lukaKorehiko Hino.
Ubuhle busibonisa elaa cala liqaqambileyo esinokuthi silifumane ekuphumeni kwelanga okanye kwiifutha zokuqala ezifika ngentwasahlobo, kodwa ebumnyameni nakubumnyama badibana izithunzi zobudala obumnyama nguGoya okanye imisebenzi erhabaxa kaHino. Umsebenzi ongenantlonelo kunye nokubetha kweso sizathu apho ungafihli nantoni na enokucaphukisa kwaye isuse isazela kunye nezikhundla.
UKorehijo Hino ligcisa laseJapan elihlala eTokyo Imifanekiso engaqhelekanga itsale umbukeli Ngokwenza umsebenzi omnyama, olayishwe ngokwesini kunye nongcolileyo ngokwawo.
Iimpawu zabo zabantu ngokungathi ngoonodoli babetha ngentetho zabo kwaye imbonakalo. Ubungakanani kunye nemizimba yabo igcina isini, nokuba singabafazi okanye amadoda. I-Hino idala imvakalelo yokukhanya komoya kodwa ifihla iingcinga ezimnyama neemvakalelo. Njengakwilizwe elitsha elinenkalipho likaHuxley, singafumana amanqaku athile woko kukhanya kusibeke phambi kwaba nodoli bathi ngamehlo abo amakhulu kunye nezimbo zabo zomzimba zisithulisa okomzuzwana.
Ndikhumbula ubugcisa be U-Yannick de la Pêche kunye nolovukelo kwaye ukhangele ezingezizo iifom kwaye uziqhelanise kakhulu nobuhle ukudlula kumdaka nenkwenkwe yakhe embi.
Hino, ngemizobo yakhe kunye nezo Amehlo amakhulu angakhanyisiyo, usisa kwidrama kunye nokuchukumisa okungaphaya. Ukubanda kunye nokukhangela ezinye iimvakalelo, okanye mhlawumbi ngaphandle kokufuna ukuya apha.
Unayo eyakho iwebhusayithi ukulandela imisebenzi yakhe kunye nemiboniso. Umzobi ukulandela umbono wakho nangendlela engaqhelekanga yokuchaphazela umbukeli ogqitha phambi kobugcisa bakhe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Amanani abantu angaqhelekanga kaKorehiko Hino
Ipakethe yasimahla yevidiyo ye-HD enemvelaphi eluhlaza (isitshixo se-chroma)